Indlela ukupheka stripsy indlela KFC? Recipe nesithombe
Uma unquma ukuhlala nabangani phezu ubhiya, le Ungadla engcono ukwedlula inkukhu stripsy, ungenawo zibheda. Lokhu appetizer ilungiselela kalula futhi ngokushesha kakhulu. Kulesi sihloko, sizokubonisa indlela ukupheka ncamashi stripsy efanayo e-KFC. Recipe ngezithombe nokukusiza ukuba uhlele ukudla ngomumo.
I engavamile walesi isidlo wukuthi cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kakhulu kulokho eqale iyikho. Crisp futhi ithenda inyama izinyoni musa ngikushiye ngabandayo. Indlela ukupheka stripsy indlela KFC? Kulula kabi:
Lungiselela 900 amagremu inkukhu, bese usika kubo zibe emapheshana ezincane (ezimbili kuya kweziyisishiyagalombili amasentimitha).
Ukulungisa sauce, uthele inkomishi inkomishi kwesigamu ubisi mix it nge amaqanda inkukhu. Kancane kancane faka kwabo isigamu inkomishi ufulawa, isipuni paprika kanye isipuni sikasawoti. Hlanganisa imikhiqizo nje ngeke zifane ukhilimu obukhulu.
Beka inkukhu inhlama ukulungele bakushiye khona imizuzu embalwa.
Ngo upulasitiki, beka izinkomishi eyodwa nengxenye kafulawa, pepper ashisayo futhi paprika ukunambitha. Khona-ke ungakwazi ukwengeza noma iyiphi izinongo kanye namakhambi, ezifana basil, u-ginger, u-garlic, oregano, ukhari noma ezivamile isinongo ngoba inkukhu. Ngemva kwalokho, qinisa isikhwama anikine izikhathi ngamandla eziningana.
Ikhanzi uthele 500 ml amafutha yemifino kanye Preheat ke.
Susa inhlama izingcezu ezimbalwa inkukhu, akugcobhoze esikhwameni, ukunyakaza futhi indawo kuso. gazinga Stripsy nxazonke, susa ngesipuni slotted futhi Dlulisa iphepha amathawula. Phinda inqubo kuze azikho ngaphezulu nalutho.
Beka isidlo eseqedile on ipuleti bese bekhonza iziphuzo. Futhi, ungakhohlwa ulungiselele stripsam lwesinaphi noma utamatisi sauce.
kanjani stripsy njengakulolu KFC
Njengoba ungahumushela Igama lesiNgisi elisho "stripsy" ngokuthi "strip", okungukuthi, sikulungisele inkukhu oqoshiwe. Yini okudingeka uyenze stripsy indlela KFC? iresiphi appetizer ungafunda ngezansi.
Thatha amabele inkukhu, zihlukanise fillet kusukela amathambo ngikugeze, omile futhi uthathe umfaniswano emapheshana.
Thatha izikebhe inkukhu (ungasebenzisa eziningi) futhi umqulu preform yayo. Yibe usubeka lelo strip esiqandisini ngehora elilodwa.
Phula amaqanda ibe isitsha uphehle kahle. Endishini yesibili, uthele ufulawa, futhi esitsheni flat - breadcrumbs. Lesi sakamuva singabangela engeza isithokelo esincane inkukhu noma iyiphi amakhambi.
Ngo epanini, uthele amafutha kancane zemifino awubeka umlilo.
Roll inkukhu izingcezu kuqala ufulawa ke cwilisa e iqanda, futhi ekugcineni wehliswe breadcrumbs. Khona-ke ababeke endaweni epanini gazinga nxazonke kuze brown golden.
stripsy Ready ngempela babeka ephepheni amathawula, kungenjalo bayoba okunamafutha kakhulu.
Indlela ukupheka stripsy njengakulolu KFC
isidlo flavorful futhi ezinoshukela eziyojatshulelwa abadala nje kuphela kodwa futhi izingane. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi benze stripsy efanayo e-KFC. Original iresiphi isidlo sisobala:
Sika 300 amagremu of ukulungele futhi kusetshenzwe inkukhu emapheshana.
Ngo ezijulile ithangi ukuxubana breadcrumbs, isipuni ingxube esiphelele inyama, usawoti ukunambitha isipuni paprika.
Roll inyama e ingxube elomile ngokushesha ukuthumela pan.
Lapho gazinga inkukhu emafutheni zemifino ashisayo, bayeke it on a napkin futhi ushiye for imizuzu embalwa.
Lesi sidlo siphelile Khonza kushisa noma kubanda. Lezi stripsy ezinoshukela sincoma ukuhambisa le yokuqala ukhilimu omuncu futhi horseradish sauce. Kuyinto enkulu for izitsha of izinkukhu nenyama, kanti ukupheka ngendlela elandelayo:
400 amagremu ukhilimu obukhulu kakhulu, indawo endishini.
Engeza ke ezintathu wezipuni eseqedile horseradish mhlophe futhi kweqembu oqoshiwe ka dill fresh.
Usawoti sauce ukunambitha uhlanganise kahle.
Nansi iresiphi yasekuqaleni appetizers, okuyinto umphelelisi ngokuphelele yimuphi iziphuzo. Funda indlela yokwenza stripsy njengoba e-KFC, upheke nathi:
Amabili izinyanda cilantro nquma ngommese.
Ababili clove sikagalikhi, fake nquma noma yeqa emshinini.
Marinade ukuxhuma Imikhiqizo uzilungiselele nge 500 ml i-yogurt, usawoti kanye nesiqholo ingxube inkukhu.
800 amagremu inkukhu webele sibe yimichilo futhi marinate kuviniga lelungiselelwe.
Ngemva kwamahora amabili, inyama kufanele sifinyelele ngesipuni slotted, babeka phezu napkins futhi yomile.
isiqeshana Ngamunye cwilisa kuqala inhlanganisela ufulawa isitashi ke e Iqanda eshaywa futhi ekugcineni ngo breadcrumbs. Khona-ke wabeka izinduku ipuleti bakushiye wedwa isikhashana.
Encwadini ikhanzi, uthele amafutha ngaphezulu futhi shisisa ke.
Stripsy Fry kuze uqweqwe enhle nxazonke, susa ngendwangu yamafutha amaningi futhi uyibeke ngoqwembe walithela.
Khonza Ungadla ukuba itafula utamatisi noma ukhilimu sauce okuzenzela.
inkukhu Stripsy ne-sesame
Lokhu appetizer lihlukile iresiphi yasekuqaleni eyaziwa kuphela Sesame inethiwekhi. Nokho, kwaba onika izinti ezikhethekile ukunambitha kanye umbono emnandi. Indlela ukupheka inkukhu nge Sesame stripsy:
400 amagremu inkukhu sibe yimichilo.
Three wezipuni kafulawa uhlanganise ne namakha yenkukhu.
Roll kokubili izingcezu inyama kufanele breaded.
Dip preform e Iqanda washaywa, bese Roll sesame futhi uyibeke bhaka, ezinamafutha akahle.
Bhaka inamathela cishe isigamu sehora. Ngaphambi kokuthumela ukudla etafuleni, wasibeka ngoqwembe uhlobise nge amahlamvu ulethisi. Ungafaka isicelo nge inkukhu iminwe okuthosiwe noma amazambane amagejambazo futhi iyiphi sauce uma bebona kunesidingo yakho.
Stripsy e oatmeal
izinti Crunchy nge maphakathi elithambile, athumba izinhliziyo izivakashi zakho. Yini okudingeka uyenze ukulungiselela crispy kanye stripsy okumnandi kanjani KFC? Recipe ayinzima Ungadla phambi kwakho:
500 amagremu inkukhu webele, sibe yimichilo iyunifomu, marinate e usoso wesoya exutshwe lamakha inkukhu kanye ukuxuba amakhambi.
basihlikihle on a grater ushizi encane kanzima kwamahora ambalwa, uthele endishini ehlukile oatmeal, uphehle iqanda ne nosawoti endishini lwesithathu.
Cwilisa izikhala ngendlela elandelayo: kuqala amaqanda, oko-oatmeal, iqanda futhi esikhundleni sokugcina ushizi. Ngokushesha Fry inkukhu epanini emafutheni esishisayo.
Khonza Ungadla itafula, zokuhlobisa it ne amakhambi fresh and ulethisi.
Balungiselele ukuza lenkampani onamileyo abangane Kulula kakhulu. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje wena ukuthola ibhayisikobho omuhle, ukuthenga isiphuzo upheke stripsy njengoba e-KFC. Indlela lokhu isidlo esilula ungafunda ngezansi:
700 amagremu umucu (webele ithanga) sibe yimichilo kobubanzi alinganayo.
Ukuze marinade, uhlanganise 50 amagremu usoso wesoya isipuni apple cider uviniga, a Tarragon kancane, pepper kanye rosemary. Uma wayefisa, ungakwazi ukwengeza usawoti kancane. Faka inkukhu ibhalwe marinade bakushiye khona amahora ambalwa.
Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba ulungiselele izithako breading: kwelinye ufulawa inkomishi fafaza kwenye amaqanda phehla ngosawoti kanye pepper, bese endaweni yesithathu breadcrumbs nge garlic omisiwe futhi iyiphi namakha inkukhu.
Cwilisa inkukhu izingcezu ngokushintshana e isimumathi ngasinye gazinga nhlangothi zonke semali samafutha zemifino.
Ready indawo stripsy ephepheni amathawula ke walala walithela ngoqwembe futhi imenze etafuleni.
Inkukhu Sticks Cornflakes
Lesi sikhathi sifuna ukuhlanganyela nawe imfihlo yokwenza crispy inkukhu stripsy. Lokhu appetizer ingalungiswa ibhekwa iziphuzo noma dinner ngokugcwele njengoba, enezela kubo fresh zemifino isaladi. Ukuze servings ezine uzodinga:
Lungiselela inkukhu nezibopho ezine wanquma ngamunye zibe emapheshana eside.
Endishini efanelekayo, beat amaqanda amabili, oqoshiwe amakhambi fresh, usawoti kanye pepper ukunambitha.
Cornflakes Chop in a blender noma ngokusebenzisa i-pin rolling. Sicela uqaphele ukuthi ngenxa yalokho, akufanele ube ufulawa, futhi izingcezu ezincane.
Cwilisa nezibopho kuqala amaqanda ke e ishq futhi uyibeke bhaka.
Stripsy Bhaka kuhovini kahle osuke usushisa kakade imizuzu 20. Khonza nanoma yimuphi sauce imifino.
Siyojabula uma ujabulele zokupheka esiye eqoqwe ngawe kule athikili. Inkukhu stripsy kuyoba isidlo enkulu inkampani friendly noma dinner eqotho, uma sihlanganise nabo imifino, amazambane athosiwe nososo ehlukahlukene. Ngakho khetha noma iyiphi iresiphi bese upheka kuso stripsy siqu.
Yomdabu iresiphi iklabishi ukuvilapha, ucwaningo kungenzeka indlela kulungiselelwa kanye izithako
Potato pie wonke umuntu
Izitsha Zezıhlabane etafuleni iholide: ongakhetha amadili kanye nedili
Step by step recipe amaqebelengwane izaqathe
Indlela okumnandi ukupheka udali: izindlela eziningana
Drama Theatre (Ryazan): umlando, repertoire, qembu
Okuchaza ukumamatheka, "inkawu namehlo avaliwe" futhi ngaphansi kwaziphi izimo ukuyisebenzisa?
Kochia okuhlobisa. Ukulima futhi Ukunakekela
Ngubani Devi Dzhons? A umlingiswa oqanjiwe movie "Pirates zaseCaribbean"
Interior umnyango Coupe wonge isikhala
Black Moon e Umdlavuza abesifazane: nomphumela isici ku ilanga izimpawu
Inthanethi endlini yangasese. Ngaphandle kwefoni futhi izintambo